Fahatsiarovana ireo hetsika teo aloha tany Arzantina - The World March
Home » About us » Tsindrio ny Notes » Mahatadidy ireo hetsika teo aloha tany Arzantina
02 / 11 / 2021 13 / 10 / 2021 ny Antonio Gancedo
Tsaroanay ireo hetsika teo aloha izay nanaparitaka sy nanomanana ny martsa tany Arzantina
Hasehonay ireo hetsika maro izay nanomanan'i Arzantina ny Diabeta marolafy marolafy sy kolontsaina amerikana faha-1 ho an'ny tsy herisetra.
Tamin'ny 6 Aogositra, tao amin'ny Patio Olmos any Córdoba Capital, dia nisy fampahatsiahivana natao Hiroshima ary Nagasaki.
Ny 14 Aogositra, tao amin'ny Villa La Ñata, Buenos Aires, dia notontosaina ny "Fankalazana ny Andron'ny Ankizy". Amin'ity hetsika mahafaly ity dia natao ny lalao, lanonana fiarovana ary fanangonana sonia ny firaiketam-po amin'ny fifanarahana ho an'ny fandrarana ny fitaovam-piadiana niokleary.
Tamin'ny 29 aogositra, nanao diabe izahay namakivaky ny Nonviolence, avy any Patio Olmos ka hatrany amin'ny Parque de Las Tejas, namarana tamin'ny fanazavana ny antony nanombohan'ny diabe sy ny fametrahana baiko ho an'ny Nonviolence.
Nandritra ny volana septambra, tao amin'ny sekoly ambaratonga fototra Dr. Agustín J. De La Vega, dia niara-niasa tamin'ireo mpianatra ao amin'ny kilasy fahefatra momba ny tsy fisian'ny herisetra sy ny fitsipika volamena amin'ny fiaraha-miaina any an-tsekoly izy ireo, ho famaranana, dia nitanisa tononkalo ho an'ny Fandriampahalemana izy ireo.
Ny fihaonambe dia niandraikitra ny mpampianatra Teresa Porcel.
Taorian'ny martsa tany Costa Rica